Na Geek n'ọtụtụ, Dịruru Nke a! | Martech Zone
Na Geek n'ọtụtụ, Dịruru Nke a!
Wednesday, May 23, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Science akụkọ, ihe ijuanya, abụghị ọkacha mmasị m ụdị ntụrụndụ. Abụ m onye nke a 300 na Hulk ụdị nwa okorobịa! (Ihunanya, huh?) Nke a dị oke mma ịbụ eziokwu, ọ bụ ezie na a na - akpọ usoro sci-fi egwu ebe nsọ na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ $ 1.99 kwa 'webisode' site na PayPal na budata! Kedu ka ị ga - esi mehie?!
Ihe ụgbọala ahụ na-adọkpụ dị ka ngwakọta nke CSI, Sci-Fi, Mystery, Thriller, Scary Movie na Comic Book. Ihe nkiri sinima bụ ọpụrụiche. Ọ bụkwa usoro izizi a ga-ewepụta ma kesaa site na weebụ dị ka nke a. Mgbe m nwere di na nwunye mmezi ego na m PayPal na akaụntụ si ụdị na-agụ ndị na-ekele m plugin mmepe. Mgbe ụfọdụ m na - enyefe ndị ọzọ ahụ ma ọ bụ m na - ewere onwe m na ihe. N'abalị a, emeela m onwe m na nke mbụ webisode nke Nsọ.
Abalị taa bụkwa nwa nke m ndị enyi '' isi nri abalị '. Ọ dị nchebe karịa izu gara aga mgbe ha kpọrọ nri India ọkụ, ndị enyi nwa m nwoke siri nri pancakes maka onye ọ bụla chọrọ ịbịa. Ha siri ihe dị ka pancakes 200, anyị nwere mmadụ iri na abụọ na-eto eto. Ha jiri Oke Ugwu sachaa ha (n'ezie).
Na maka ọzara?
Mgbe m risịrị otu pakeki, ebudatara m websaịtị mbụ. Agbanyere m ya site na faịlụ QuickTime .mov na AppleTV .m4v faịlụ site na iji QuickTime Pro na MacBookPro m. M wee webata ya na iTunes na laptọọpụ m na ikuku na-emekọrịta ya na AppleTV. Ozugbo ahụ, m na-ele ya na telivishọn m!
Kedu ka nke ahụ si dị mma? Ekwenyesiri m ike na nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma m metụrụla! Oh, na Ebe nsọ kacha njọ. Ana m atụ anya na websaịtị ọzọ!
Ndụmọdụ okpu nye Steven na WinExtra. Ma e nwere a Ebe nsọ Blog!
Ndi Kachasi Nma
Ndi ahia gi ma ihe omuma ihe anọ ndia?
Mee 23, 2007 na 8: 06 PM
M dere banyere nke a ụnyaahụ .. nanị tinye m risịrị
Mee 23, 2007 na 8: 09 PM
Echefuru m okpu m n'isi gị, Steven! Ọ dị m nwute! Ọ dị ebe a, ọ bụ m hụrụ ebe nsọ.
Mee 23, 2007 na 8: 50 PM
abụghị nsogbu Douglas 🙂
btw ị gaghị ama ezigbo web 2.0 agba ụdị ha maka WordPress .. Achọrọ m otu maka relaunch nke ọzọ blog (ma ọ bụrụ na ị na-eme ị nwere ike mgbe niile email na dezie wepụ a oku si :))
Iwu nke Ndọrọ
Mee 23, 2007 na 11: 42 PM
Ebe nsọ anaghị anụkwa maka ya… mana nkọwa ya dara ka $ 2 😀
Ma AppleTV bit maa ụda jụụ… M ka na-agbalị iji nweta isi m gburugburu na nkwupụta